ဒီဇင်ဘာအလွမ်း ( Henry Aung ) — HiveHustlers
#myanmar #knowledge #proofofbrain #archon #creativecoin #aeneas #hivelist #hivehustlers #leo
uthantzin last month
ဒီဇင်ဘာအလွမ်းဆိုတဲ့ အတိုင်း ပျော်စရာရော လွမ်းစရာတွေရော အေးအတူ ပူအမျှ ကြိုးစား ဖြတ်သန်းကြရအုံးမှာပေါ့...!PIZZA
တလှေတည်းစီးနေတဲ့ ခရီးသွားတွေကိုး ... !PIZZA. !LOL
nyimwa last month
ကိုဟင်ရာ ခုချိန်မှာ ဒေသအသီးသီးမှာ ခိုကိုးရာမဲ့နေတဲ့ ပြည်သူတွေမျက်နှာကို ပြန်မြင်ယောင်ပီး အရမ်းဝမ်းနည်းမိတယ်။
ဟုတ်တာပေါ့... အချို့ဆိုရင် အိမ်မပြန်နိုင်တာ အနှစ် ၄၀ လောက်ရှိနေကြပြီ။ !PIZZA. !LOL
nyinyiwin last month
အုန်ကန်နဲ့ ရေချိုးတာဆို ညအိပ်ရေတွေ မချိုးပါနဲ့ဗျာ ကျန်းမာရေးထိခိုက်မယ်။ !LOLZ !PIZZA !LUV
ညဘက်တော့ မချိုးနိုင်ဘူးဗျို့... တရက် တခါပဲ... ဒါတောင် နေ့လည်မှ။ !PIZZA. !LOL
အစ်ကိုလည်း အဲသလိုပဲ ဆုတောင်းပါတယ်။ !PIZZA. !LOL
ခရစ္စမတ်က မိသားစုတွေနဲ့ဆို ပျော်ဖို့ကောင်းသလို
အားလုံး ဘုရားကောင်းချီးပေး ပါစေပဲ ဆုတောင်းရတာပါ့။ !PIZZA. !LOL
တွေးကြည့် မြင်ယောင်ကြည့်လိုက်ရင် ဝမ်းနည်းစရာတွေကြီးပါပဲ အကို
ဘယ်တတ်နိုင်မလဲ... မြန်မာပြည်မှာလူ ဖြစ်လာရပြီကိုးလို့။. !PIZZA. !LOL
အခုမှ အစရှိပါသေးတယ်။. !PIZZA. !LOL
nweoomon last month
ခုမှပဲနားထောင်ဖူးတယ်။ အမမိသားစုနဲ့နေနေရတာတောင် အိမ်ပြန်ချင်စိတ်ဖြစ်မိတယ်။😔
ဟိုအရင်ချိန်ကတော့ ဒီသီချင်းနဲ့ပဲ ကြိတ်ငိုနေခဲ့ရတာ.....!PIZZA. !LOL
@kachinhenry(8/16) tipped @naythan (x1)